ကုံရာသီဖွားတွေဟာ အောင်မြင်ချမ်းသာဖို့ အခွင့်အလမ်းပိုများပါတယ်တဲ့
ကုံရာသီဖွားတွေဟာ ပိုမိုအောင်မြင်ချမ်းသာဖို့ အခွင့်အလမ်းပိုများပါတယ်တဲ့
22 May 2019 . 5:29 PM
ဇန်နဝါရီလ (၂ဝ) နဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၈) ရက်ကြားမှာ မွေးဖွားတဲ့ ကုံရာသီဖွားတွေဟာ အောင်မြင်မှုနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်လို့ သိပ္ပံနည်းကျဖော်ပြထားပါတယ်။ သမိုင်းအဆက်ဆက်မှာ အားကစားသမား၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်၊ သရုပ်ဆောင်၊ သိပ္ပံပညာရှင်နဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ မွေးသက္ကရာဇ်တွေကို လက်လှမ်းမီသလောက် သုတေသနပြုလိုက်တဲ့အခါမှာ အများစုက ကုံရာသီဖွားတွေဖြစ်နေကြပါတယ်။ တိုက်ဆိုင်မှုများဖြစ်နေမလားဆိုပြီး အရေအတွက် ပိုများအောင် စစ်တမ်းကောက်ယူပေမယ့် ရလဒ်ကတော့ မပြောင်းလဲခဲ့ပါဘူး။
ကုံရာသီဖွားတွေဟာ ဘာကြောင့် အောင်မြင်ရသလဲဆိုတဲ့ အဖြေကိုတော့ စစ်တမ်းမှာ ဖော်ပြမထားပေမယ့် Vice Broadly နက္ခတ္တမဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ဆောင်းပါးအရ ကုံရာသီဖွားတွေဟာ ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ အံ့သြမင်သက်ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို ဖန်တီးရာမှာ မွေ့လျော်ပြီး ခရေစေ့တွင်းကျ တွေးတောတတ်သူတွေလို့ သိရပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ ပတ်ဝန်ကျင်းသစ်ကို ဖန်တီးလိုစိတ် ပြင်းပြတယ်၊ အမှီအခိုကင်းကင်းနဲ့ ရပ်တည်လိုတယ် ပြီးတော့ လူမှုဆက်ဆံရေးမှာလည်း ကောင်းမွန်တယ်လို့ ဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။
Abraham Lincoln ၊ Thomas Alva Edison ၊ Franklin D. Roosevelt ၊ Christian Bale ၊ Ashton Kutcher ၊ Ellen DeGeneres ၊ Jennifer Aniston ၊ Oprah Winfrey ၊ Michael Jordan ၊ Cristiano Ronaldo ၊ Neymar ၊ Luis Suarez ၊ Shakira ၊ Bob Marley ၊ Harry Styles နဲ့ Justin Timberlake တို့ဟာ ကုံရာသီဖွားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။
University of Oxford ရဲ့ နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Percy Seymour ရဲ့ The Scientific Proof of Astrology စာအုပ်မှာတော့ “နေအဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုလုံးဟာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ သံလိုက်စက်ကွင်းပေါ်မှာ စည်းဝါးအလိုက် လည်ပတ်နေတာပါ။ စည်းဝါးအလိုက်ဆိုတော့ ရာသီဖွားတွေရဲ့ တီးလုံးသံစဉ်တွေက ကွဲပြားမှာပါ” လို့ ဆိုသွားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရာသီဖွားပေါ်မူတည်ပြီး ကိုယ်ကျင့်စရိုက်ပြောင်းလဲမှုကိုတော့ လက်ခံသင့်တယ်လို့ ကောက်ချက်ချထားပါတယ်။ ကဲ . . . ဇန်နဝါရီလ (၂ဝ) နဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၈) ရက်ကြားမှာ မွေးဖွားတဲ့ ကုံရာသီဖွားတွေကတော့ အခုဆောင်းပါးကို ဖတ်ပြီး လက်မထောင်နေလောက်ပါပြီနော်။
Reference and Photo Credit – Daily Mail ၊ Astrology Bay ၊ PEOPLE